Ra'isal wasaare geeriyooday kaddib kulan uu la qaatay golahiisa wasiirrada - Calanka.com
Calanka.com » Dibedda » Ra’isal wasaare geeriyooday kaddib kulan uu la qaatay golahiisa wasiirrada
July 9, 2020 ( July 10, 2020 ) 0 Comments 0 Views1
Ra’isal wasaarihii dalka Ivory Coast Amadou Gon Coulibaly ayaa geeriyooday kaddib markii uu xanuun ku soo booday isaga oo kulan la lahaa wasiirada xukuumadiisa.
Da’diisu waxay ahayd 61 waxaana dhawaan loo doortay in uu noqdo musharaxa xisbiga talada dalkaasi haya doorashada bisha soo socta ee Oktoobar’ kadib markii Alassane Ouattara oo ah madaxweynaha dalkaas uu sheegay in aanu mar sedexaad uu u tartami doonin xilka madaxtinimada.
Mr Gon Coulibaly ayaa dhawaan ka soo laabtay dalka Faransiiska halkaas oo muddo laba bilood ah looga daweynayay xanuun dhinaca wadnaha.
Dhimashadiisu waxaa ay abuuraysaa kalsooni daro weyn oo dhanka doorashada ah .
Mr Gon Coulibaly ayaa wadanaha qaliin looga sameyay sanadkii 2012-kii isagoo labadii bishii May ee sanadkaan ugu safray magaalada Paris ee dalka Faransiiska xaalado caafimaad dartood.
Waxaa uu dalka dib ugu soo laabtay khamiistii la soo dhaafay waxaana uu yiri “waan soo laabtay si aan ugu garab istaago madaxweynaha horumarka iyo dhismaha dalka.”
Mr Gon Coulibaly waxaa uu ka mid ahaa dadka loo maleeynayay in uu ku guuleysan doono doorashada madaxtinimada ee soo aadan.
Mr Ouattara ayaa go’aankiisa shaaciyay bishii Maarso kaas oo ahaa in mar sedaxaad aanu u tartami doonin xukunka dalka .
Xiligaas wariyaha BBC-da James Copnall ee magaalada Abidjan, ayaa qoray in uu Mr Ouattara uu meesha ka saaray arrintii caadiga ka aheyd gobalka oo aheyd in kursiga la isaga sii fadhiyo.
Xitaa way cadeed in Mr Gon Coulibaly uu noqon lahaa musharaxa guuleysta doorashada soo aadan .
Taageerayaasha Mr Ouattara ayaa sheegaya inuu dalka gaarsiiyay koboc dhaqaale, xasillooni iyo deganaansho dib loogu soo celiyay Ivory Coast heerka caalamiga ah.
Balse siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo dad badan oo reer Ivory Coast ah ayaa sheegaya in madaxweynuhu aanu gaarin awood uu umadda isu keeno, oo uu bogsiiyo nabarradii iska horimaadkii qaraaraa ee kala qaybiyay Ivory Coast .
Qiyaastii 3,000 oo qof ayaa loo maleynayaa in ay ku dhinteen dagaalkii ka dhashay markii murashaxii Laurent Gbagbo uu diiday inuu aqbalo in looga adkaaday doorashadii 2010-kii ee Mr Ouattara uu ku guuleystay , ka hor intaan ciidammadii daacada u ahaa madaxweynaha hadda aaney xiraya Mr Gbagbo bishii Abriil sanadkii 2011.
Khilaafaadka siyaasadeed ee muddada dheer ka dhex taagnaa isaga, Mr Ouattara iyo madaxweynihii hore, Henri Konan Bédié, ayaa dalka Ivory Coast,ka abuuray dhibaato ba’an oo saameyn ku yeelatay nolasha dadka dalkaas.
SAWIRRO: Madaxweyne Putin oo magaalada Moscow kusoo bandhigay murqihiisa
Ruushka ayaa u dabaal dagaya xuska 75 guurada “maalinta guusha”, isaga oo soo bandhigay awoodiisa milateri xilli laga cabsanayo faafidda cudurka coronavirus. Madaxweyne...
Wareeggii koowaad ee wadahadallada Djibouti oo la soo gabo-gabeeyey
Waxaa magaalada Djibouti ku soo xirmay maanta wareeggii koowaad ee furitaanka wadahadalka dhinacyada Soomaaliya iyo Somaliland. Maalinta berri ah ayaa loo ballamay in...
Senator Bernie Sanders oo ahaa musharrax u ordayay magacaabista xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ayaa Arbacada maanta ah ku dhawaaqay inuu...
Mareykanka ayaa dacwad kusoo oogay madaxweynaha waddanka Venezuela, Nicolás Maduro iyo saraakiil sar sare uu u dhashay dalkaas, kuwaasoo uu ku tilmaamay inay...